China Kitapo Straw voajanahary China Eco-friendly Cosmetic Organizer Zipper Pouch Make Up Bag orinasa sy mpamatsy | Changlin
Material: Mololo taratasy Weight: 53g
fampiharana: mpikarakara kosmetika, fidiovana, asa fivezivezena
Mahatsara azy: ara-nofo,azo havaozina
Ny mpantsaka dia fitaovana mitovy amin'ny an'ny vatana ihany. Ny kitapo iray manontolo dia voajanahary ary mahafeno ny fepetra "sariaka amin'ny tontolo iainana". Ny mpantsaka dia fitaovana mitovy amin'ny an'ny vatana. Ny kitapo iray manontolo dia voajanahary ary mahafeno ny fepetra "sariaka amin'ny tontolo iainana".
Previous: Kanto kosmetika mpiorina tontolo iainana Zipper Pouch miaraka amin'ny Tassel Puller
Manaraka: Kitapo zipper mpikarakara tarehy kosmetika vita amin'ny taratasy voajanahary